ကိုယျဝနျဆောငျနဲ့ မှိုရောဂါ | OnDoctor
By OnDoctor Editor	 On Apr 15, 2018 Last updated Jan 18, 2020
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ပြဿနာတွေထဲမှာ မိန်းမကိုယ်လမ်းကြောင်း မှိုစွဲတာလည်း တစ်ခု အပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးတွေ မှိုစွဲတာကို ဖြစ်စေတဲ့ အဓိကအကောင်ကတော့ Candida albicans လို့ခေါ်တဲ့ အကောင်တွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သဘာဝအတိုင်းလည်း ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အကျိုးပြုတဲ့ မှိုအမျိုးအစားတွေ၊ ဘတ်တီးရီးယားတွေ ရှိပါတယ်။ အခြေအနေတစ်ခုကြောင့် ဒီလိုအကျိုးပြုတဲ့ အကောင်တွေနည်းသွားရင် ရောဂါဖြစ်စေတဲ့အကောင်တွေ အရမ်းပွားလာပါတော့တယ်။ အခုလည်း ဒီသဘောပါပဲ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အမျိုးသမီးတွေကိုယ်ထဲကနေ အီစထရိုဂျင်ဟော်မုန်းတွေ အရမ်းထွက်လာတယ်။ ဒီလိုထွက်လာတဲ့အခါ မိန်းမကိုယ်ကနေ glycogen တွေ ပိုထွက်လာတယ်။ Glycogen တွေပိုများလာလေလေ မိန်းမကိုယ်ထဲမှာ မှိုပေါက်လာဖို့ပိုလွယ်လာလေပါ။ ဒါ့အပြင် ကိုယ်က ပိုးသတ်ဆေးတစ်ခုခု ကြာရှည်သောက်သုံးလိုက်တာကြောင့်လည်း မိန်းမကိုယ်မှိုစွဲစေပါတယ်။ ပိုးသတ်ဆေးတွေက မကောင်းတဲ့ပိုးတွေ တင်မကပဲ ပုံမှန်အတိုင်းရှိနေတဲ့ အကောင်တွေပါ သတ်ပစ်လိုက်တဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
မိန်းမကိုယ်မှိုစွဲရင်ပြတတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ မိန်းမကိုယ်က ယားမယ်၊ ရောင်လာမယ်၊ ပူစပ်ပူလောင်ခံစားရမယ်၊ နီရဲလာမယ်၊ ဒါ့အပြင် အနံ့မနံတဲ့ အဖြူတွေဆင်းမယ်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် လိင်ဆက်ဆံရင် နာကျင်မယ်၊ ဆီးသွားရင် မီးစနဲ့ထိတွေ့သလို ပူမယ်၊ ဒီလိုလက္ခဏာတွေ ခံစားရရင် နီးစပ်ရာသားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်နဲ့သွားပြကြည့်ပါ။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ သောက်လို့ရတဲ့ဆေးရှိတယ်၊ သောက်လို့မရတဲ့ဆေးရှိပါတယ်။
ကိုယ့်ဖာသာထင်တာတွေသောက်လိုက်မိလို့ မှားသွားရင် မကောင်းတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်သွားနိုင်လို့ပါ။ များသောအားဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ကလေးကိုထိခိုက်မှုမဖြစ်အောင်လို့ မိန်းမကိုယ်လမ်းကြောင်း မှိုစွဲတာလောက်ကိုတော့ သောက်ဆေးမပေးပဲ လိမ်းဆေးလောက်နဲ့ပဲ ကုသလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မိန်းမကိုယ်ထဲထည့်ရတဲ့ ဆေးတောင့်တွေနဲ့လည်း ကုသလေ့ရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ဒီဆေးတွေက ၇ ရက်လောက်ဆက်တိုက်သုံးပေးရတယ်။
ညဖက်အိပ်ရာဝင်ခါနီး သုံးပေးရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ Miconazole, Clotrimazole လို လိမ်းဆေးတွေ သုံးပေးလို့ရပါတယ်။ Fluconazole လိုဆေးမျိုးကိုတော့ ကိုယ်ဝန်ပထမ သုံးလအတွင်းမှာ အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ ဆေးလိမ်းပြီး သက်သာအောင် အချိန်တစ်ခုတော့ စောင့်ပေးဖို့ လိုပါမယ်။ ဒီကြားထဲ ခံစားရတဲ့ ဝေဒနာသက်သာအောင် ရေခဲအိတ် မကြာမကြာ ကပ်ပေးလို့ရပါတယ်။
မှိုစွဲတာအတွက် လိမ်းဆေးတွေ ဖော်ပြလိုက်ပေမဲ့ ကိုယ့်ဖာသာ အစအဆုံးကုမယ်လို့တော့ မစဉ်းစားတာ ကောင်းပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လည်းဆိုတော့ အပေါ်က လက္ခဏာတွေ ခံစားရပေမဲ့ မှိုစွဲတာမဟုတ်ပဲ တခြားရောဂါတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ် ဥပမာ – လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တဲ့ရောဂါ တွေမှာဆိုလည်း ဒီလိုရောဂါလက္ခဏာတွေ ပြနိုင်ပါသေးတယ်။
ဒါဆို မေးစရာရှိတာက ဒီလိုကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ မှိုစွဲတဲ့အခါ မွေးလာမဲ့ ကလေးငယ်ကို ထိခိုက်သွားနိုင်ပါသလား? သိပ်မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ မိန်းမကိုယ်လမ်းကြောင်းမှာဖြစ်တဲ့ မှိုရောဂါက ဗိုက်ထဲကကလေးငယ်ကို ဘာမှထိခိုက်မှု ဖြစ်စေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သို့ပေမဲ့ တစ်ခုရှိတာက ကလေးမွေးတဲ့အခါ မွေးလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်နဲ့ ထိတွေ့မိတာမို့ ဒီအချိန်မှာတော့ကလေးကို ကူးစက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုကူးစက်သွားရင် ကလေးပါးစပ်ထဲမှာ အဖြူအကွက်အကွက် (မှဲ့ခရု) တွေထွက်လာစေတယ် (တစ်ခုသတိပြုရမှာက ဘာရောဂါမှမရှိတဲ့ ကလေးငယ်တွေမှာလည်း ဒီလိုမှဲ့ခရု တွေထွက်လာတတ်ပါတယ်) ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး၊ အလွယ်တကူ ကုသနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ် အမျိုးသားနဲ့ လိင်ဆက်ဆံမိခဲ့ရင် (ရှားတော့ရှားပေမဲ့) ကူးစက်နိုင်ခြေတော့ ရှိပါတယ်။
ဒါဆို ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေ မိန်းမကိုယ်လမ်းကြောင်း မှိုမစွဲအောင် ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ? လေ့လာမှုတွေ အရတော့ မိန်းမကိုယ်လမ်းကြောင်းကို ခြောက်သွေ့အောင်ထားရင် မှိုစွဲတာကို အတော်အသင့် သက်သာစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် လေဝင်လေထွက်ကောင်းတဲ့ ချည်းသားအတွင်းခံတွေ ဝတ်ဆင်ပေးနိုင်တယ်။
အတွင်းခံ စိုစွတ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာ မကြာမကြာ လဲလှယ်ပေးပါ။ နောက်ပြီး အရမ်းကျပ်တဲ့ အတွင်းခံတွေ ဝတ်ဖို့မသင့်တော်ပါဘူး။ ညဖက်အိပ်တဲ့အခါမှာလည်း ဖြစ်နိုင်ရင် အတွင်းခံ ချွတ်အိပ်သင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မိန်းမကိုယ်နှိုတ်ဆေးတာတွေ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ အပေါ့သွားပြီးတဲ့အခါ အနောက်ဖက် (စအိုဖက်) ကနေ အရှေ့ကို ဆွဲသုတ်ပေးပါ။ ဒီလိုနည်းတွေက မိန်းမကိုယ်လမ်းကြောင်း မှိုစွဲတာမဖြစ်အောင် အတန်အသင့်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Author : Dr. Wayne
ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျမှာဖွဈလရှေိ့တဲ့ ပွဿနာတှထေဲမှာ မိနျးမကိုယျလမျးကွောငျး မှိုစှဲတာလညျး တဈခု အပါအဝငျ ဖွဈပါတယျ။ ကိုယျဝနျဆောငျ အမြိုးသမီးတှေ မှိုစှဲတာကို ဖွဈစတေဲ့ အဓိကအကောငျကတော့ Candida albicans လို့ချေါတဲ့ အကောငျတှကွေောငျ့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
သဘာဝအတိုငျးလညျး ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ အကြိုးပွုတဲ့ မှိုအမြိုးအစားတှေ၊ ဘတျတီးရီးယားတှေ ရှိပါတယျ။ အခွအေနတေဈခုကွောငျ့ ဒီလိုအကြိုးပွုတဲ့ အကောငျတှနေညျးသှားရငျ ရောဂါဖွဈစတေဲ့အကောငျတှေ အရမျးပှားလာပါတော့တယျ။ အခုလညျး ဒီသဘောပါပဲ။
ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျမှာ အမြိုးသမီးတှကေိုယျထဲကနေ အီစထရိုဂငျြဟျောမုနျးတှေ အရမျးထှကျလာတယျ။ ဒီလိုထှကျလာတဲ့အခါ မိနျးမကိုယျကနေ glycogen တှေ ပိုထှကျလာတယျ။ Glycogen တှပေိုမြားလာလလေေ မိနျးမကိုယျထဲမှာ မှိုပေါကျလာဖို့ပိုလှယျလာလပေါ။ ဒါ့အပွငျ ကိုယျက ပိုးသတျဆေးတဈခုခု ကွာရှညျသောကျသုံးလိုကျတာကွောငျ့လညျး မိနျးမကိုယျမှိုစှဲစပေါတယျ။ ပိုးသတျဆေးတှကေ မကောငျးတဲ့ပိုးတှေ တငျမကပဲ ပုံမှနျအတိုငျးရှိနတေဲ့ အကောငျတှပေါ သတျပဈလိုကျတဲ့အတှကျ ဖွဈပါတယျ။
မိနျးမကိုယျမှိုစှဲရငျပွတတျတဲ့ လက်ခဏာတှကေတော့ မိနျးမကိုယျက ယားမယျ၊ ရောငျလာမယျ၊ ပူစပျပူလောငျခံစားရမယျ၊ နီရဲလာမယျ၊ ဒါ့အပွငျ အနံ့မနံတဲ့ အဖွူတှဆေငျးမယျ၊ ကိုယျဝနျဆောငျစဉျ လိငျဆကျဆံရငျ နာကငျြမယျ၊ ဆီးသှားရငျ မီးစနဲ့ထိတှသေ့လို ပူမယျ၊ ဒီလိုလက်ခဏာတှေ ခံစားရရငျ နီးစပျရာသားဖှားမီးယပျဆရာဝနျနဲ့သှားပွကွညျ့ပါ။ ဘာ့ကွောငျ့လဲဆိုတော့ ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျမှာ သောကျလို့ရတဲ့ဆေးရှိတယျ၊ သောကျလို့မရတဲ့ဆေးရှိပါတယျ။
ကိုယျ့ဖာသာထငျတာတှသေောကျလိုကျမိလို့ မှားသှားရငျ မကောငျးတဲ့ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးတှေ ဖွဈသှားနိုငျလို့ပါ။ မြားသောအားဖွငျ့ ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျမှာ ကလေးကိုထိခိုကျမှုမဖွဈအောငျလို့ မိနျးမကိုယျလမျးကွောငျး မှိုစှဲတာလောကျကိုတော့ သောကျဆေးမပေးပဲ လိမျးဆေးလောကျနဲ့ပဲ ကုသလရှေိ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ မိနျးမကိုယျထဲထညျ့ရတဲ့ ဆေးတောငျ့တှနေဲ့လညျး ကုသလရှေိ့ပါတယျ။ မြားသောအားဖွငျ့ ဒီဆေးတှကေ ၇ ရကျလောကျဆကျတိုကျသုံးပေးရတယျ။
ညဖကျအိပျရာဝငျခါနီး သုံးပေးရငျ ပိုကောငျးပါတယျ။ Miconazole, Clotrimazole လို လိမျးဆေးတှေ သုံးပေးလို့ရပါတယျ။ Fluconazole လိုဆေးမြိုးကိုတော့ ကိုယျဝနျပထမ သုံးလအတှငျးမှာ အသုံးမပွုသငျ့ပါဘူး။ ဆေးလိမျးပွီး သကျသာအောငျ အခြိနျတဈခုတော့ စောငျ့ပေးဖို့ လိုပါမယျ။ ဒီကွားထဲ ခံစားရတဲ့ ဝဒေနာသကျသာအောငျ ရခေဲအိတျ မကွာမကွာ ကပျပေးလို့ရပါတယျ။
မှိုစှဲတာအတှကျ လိမျးဆေးတှေ ဖျောပွလိုကျပမေဲ့ ကိုယျ့ဖာသာ အစအဆုံးကုမယျလို့တော့ မစဉျးစားတာ ကောငျးပါတယျ။ ဘာ့ကွောငျ့လညျးဆိုတော့ အပျေါက လက်ခဏာတှေ ခံစားရပမေဲ့ မှိုစှဲတာမဟုတျပဲ တခွားရောဂါတှကွေောငျ့လညျး ဖွဈနိုငျပါသေးတယျ ဥပမာ – လိငျမှတဈဆငျ့ ကူးစကျတဲ့ရောဂါ တှမှောဆိုလညျး ဒီလိုရောဂါလက်ခဏာတှေ ပွနိုငျပါသေးတယျ။
ဒါဆို မေးစရာရှိတာက ဒီလိုကိုယျဝနျဆောငျခြိနျမှာ မှိုစှဲတဲ့အခါ မှေးလာမဲ့ ကလေးငယျကို ထိခိုကျသှားနိုငျပါသလား? သိပျမစိုးရိမျပါနဲ့။ မိနျးမကိုယျလမျးကွောငျးမှာဖွဈတဲ့ မှိုရောဂါက ဗိုကျထဲကကလေးငယျကို ဘာမှထိခိုကျမှု ဖွဈစမှောမဟုတျပါဘူး။ သို့ပမေဲ့ တဈခုရှိတာက ကလေးမှေးတဲ့အခါ မှေးလမျးကွောငျးတဈလြှောကျနဲ့ ထိတှမေိ့တာမို့ ဒီအခြိနျမှာတော့ကလေးကို ကူးစကျသှားနိုငျပါတယျ။ ဒီလိုကူးစကျသှားရငျ ကလေးပါးစပျထဲမှာ အဖွူအကှကျအကှကျ (မှဲ့ခရု) တှထှေကျလာစတေယျ (တဈခုသတိပွုရမှာက ဘာရောဂါမှမရှိတဲ့ ကလေးငယျတှမှောလညျး ဒီလိုမှဲ့ခရု တှထှေကျလာတတျပါတယျ) ဘာမှစိတျပူစရာမလိုပါဘူး၊ အလှယျတကူ ကုသနိုငျပါတယျ။ ကိုယျဝနျရှိစဉျ အမြိုးသားနဲ့ လိငျဆကျဆံမိခဲ့ရငျ (ရှားတော့ရှားပမေဲ့) ကူးစကျနိုငျခွတေော့ ရှိပါတယျ။
ဒါဆို ကိုယျဝနျဆောငျအမြိုးသမီးတှေ မိနျးမကိုယျလမျးကွောငျး မှိုမစှဲအောငျ ဘယျလိုကာကှယျကွမလဲ? လလေ့ာမှုတှေ အရတော့ မိနျးမကိုယျလမျးကွောငျးကို ခွောကျသှအေ့ောငျထားရငျ မှိုစှဲတာကို အတျောအသငျ့ သကျသာစတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ လဝေငျလထှေကျကောငျးတဲ့ ခညျြးသားအတှငျးခံတှေ ဝတျဆငျပေးနိုငျတယျ။
အတှငျးခံ စိုစှတျနတေဲ့အခြိနျမြိုးမှာ မကွာမကွာ လဲလှယျပေးပါ။ နောကျပွီး အရမျးကပျြတဲ့ အတှငျးခံတှေ ဝတျဖို့မသငျ့တျောပါဘူး။ ညဖကျအိပျတဲ့အခါမှာလညျး ဖွဈနိုငျရငျ အတှငျးခံ ခြှတျအိပျသငျ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ မိနျးမကိုယျနှိုတျဆေးတာတှေ မလုပျသငျ့ပါဘူး။ အပေါ့သှားပွီးတဲ့အခါ အနောကျဖကျ (စအိုဖကျ) ကနေ အရှကေို့ ဆှဲသုတျပေးပါ။ ဒီလိုနညျးတှကေ မိနျးမကိုယျလမျးကွောငျး မှိုစှဲတာမဖွဈအောငျ အတနျအသငျ့ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
Author : Dr.Wayne
ကိုယျဝနျဆောငျမမေမြေား နှငျ့ လိငျဆကျဆံမှု